रञ्जित तामाङपछि प्रचण्डले कसलाई बनाउदैछन् अखिल (क्रान्तिकारी)को अध्यक्ष ? यस्तो छ तयारी — Sanchar Kendra
रञ्जित तामाङपछि प्रचण्डले कसलाई बनाउदैछन् अखिल (क्रान्तिकारी)को अध्यक्ष ? यस्तो छ तयारी
काठमाडौँ । अखिल (क्रान्तिकारी)ले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने गरी साङ्गठनिक प्रस्ताव गरेको छ । क्रान्तिकारीको बिहीबारदेखि शुरु भएको २२औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार सुरु भएको बन्द सत्रमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।
अध्यक्षका प्रत्यासी प्रचारप्रसार समितिका संयोजक सुरेन्द्र बस्नेतले २५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने जानकारी दिएका छन् ।
वन्दसत्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरुङ र शक्तिबहादुर बस्नेतले समसामयिक राजनीतिक विषय र क्रान्तिकारीले अङ्गीकार गर्नुपर्ने शैक्षिक मुद्दा तथा आन्दोलनका बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
अध्यक्ष तामाङले राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सो प्रतिवेदन उपर छलफल गर्न विभिन्न जिल्ला मिलाएर ११ वटा समूह बनाइएको क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।
मुलतः नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत र पन्चा सिंह दौडमा छन् । यस्तै, हालसम्म महासचिव उत्तम अधिकारीसहित तिलकराज भण्डारी, दीपक देवकोटा र विजय गौतम पनि अध्यक्षको आकांक्षी देखिएका छन् । प्रचण्डले अध्यक्ष कसलाई बनाउछन भन्ने बिषयमा अहिलेसम्म केहि बोलेका छैनन् ।